Home ၊အညာနွေတမာမြေ: ဒီကနေ့ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။
1. ကျော်လွင် (မန္တလေး)
2. ဌေးအောင် (ခ) စောလွင် (မန္တလေး)
3. အောင်မင်း (မန္တလေး)
4. မြင့်လွင် (မန္တလေး)
5. အီစာကို (မန္တလေး)
6. စောအယ်ကလိုထူး (မန္တလေး)
7. ဦးဘိုဖျင်း (မန္တလေး)
8. ခွန်ပေါလု (ခ) မောင်ထွေး (အဖ ဦးသိန်းမောင်) (မန္တလေး)
9. ဇွဲပိုင်စိုး (မန္တလေး)
10. ခွန်ပေါလု (အဖဦးနေရိန်) (မန္တလေး)
11. ဦးသန့်ရှင်း(သရက်ထောင်) ၊
12. ကိုစောတွတ်ကီ (သရက်ထောင်)
13. အောင်ဌေး (တောင်ငူထောင်)
16. ကိုတူး (တောင်ငူထောင်)
18. ခင်မောင်ညွန့်ခေါ် အကြီးကောင် (တောင်ငူထောင်)
19. ကိုခင်မောင်ပု (ခ) အကြီးကောင် (သရက်ထောင်)
20. စောဆေးကလယ် (အင်းစိန်)
21. ကိုသန်းနိုင်ဦး (ခ) အစစ် (အင်းစိန်)
22. ဦးအောင်တိုးဝေ (ပုသိမ်ထောင်)
25. ဦးရဲမြင့် (ခ) ဆရာရဲ (ပူတာအို)
26. ဦးရဲညွန့် (မြိတ်ထောင်)
27. ကိုအောင်ကျော် (ပြည်ထောင်)
28. မြတ်ဆွေ (မန္တလေး)
29. မောင်ဘိ (တောင်ကြီး)
30. အိုက်ကွန် (တောင်ကြီး)
31. မောင်လှ (တောင်ကြီး)
32. ဦးဝိစိတ္တ (တောင်ကြီး)
အေအေပီပီမှ မြန်မာစံတော်ချိန် ၄နာရီထိ စုဆောင်းထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းစိန်က လွတ်လာတဲ့ ကိုကြည်သန်း(ဟင်္သာတ) ဟာ လွတ်ရက်စေ့သူဖြစ်လို့ သူ့စာရင်းမထည့်ထားပါဘူး။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းတာအရ အကျဉ်းသား ၄ထောင်ဝန်းကျင်လောက်လွှတ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၃၀ ကျော်ဘဲပါတာတော့ အများအမြင်ပါဘဲခင်များ သမတကြီးရဲ့ စေတနာကို တုံ့ပြန်ကြပါ။
Posted by အညာနွေတမာမြေ anyarnwaytamarmyay at 3:57:00 PM